६० वर्षको उमेरमा पनि भुवन केसी र जियाको अनौठो प्रेम कहानी, कुनै फिल्मको भन्दा कम छैन (भिडियो हेर्नुस्) – Online Sunapati
मुख्य पृष्ठ /Video/६० वर्षको उमेरमा पनि भुवन केसी र जियाको अनौठो प्रेम कहानी, कुनै फिल्मको भन्दा कम छैन (भिडियो हेर्नुस्)
६० वर्षको उमेरमा पनि भुवन केसी र जियाको अनौठो प्रेम कहानी, कुनै फिल्मको भन्दा कम छैन (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौं । अभिनेता भुवन केसी र जिया केसीबीचको सम्बन्ध कुनै फिल्मको कहानी भन्दा कम छैन । फिल्म क्षेत्रमा भविष्य बनाउँदै गरेकी जिया यो क्षेत्रमा आएदेखि नै भुवनको एक फ्यान भएको बताउने गरेकी छन् । भुवन दोस्रो विवाह पनि सफल नभएर एक्लिएको बेलामा जियाले भुवनलाई साथ दिएकी थिइन् । सन् २०१४ देखि भुवन र जिया दुइ जनासंगै बस्न थालेका छन् । जिया भुवनकै घरमा बस्छिन् । उमेरले ६० वर्ष पुगिसकेका भुवन अहिले पनि उत्तिकै आकर्षक छन् र युवतीका कारण चर्चामा आएका छन् ।
गत वर्ष जापानमा अवार्ड कार्यक्रमका लागि जाँदा जिया र भुवन संगै देखिएका थिए । उनका छोरा अनमोल पनि गएको भएपनि उनी विमानस्थलमा क्यामेराका साथमा देखिएनन् । जिया र भुवन मात्र क्यामेरामा देखिएका थिए । उनीहरु दुवैजनाले संगै अन्तरवार्ता पनि दिएका थिए । क्याप्टेन फिल्मको तर्फवाट जापानमा अवार्डका लागि जान लागेको भन्दै उनीहरुले जवाफ दिएका थिए । जापानमा अवार्ड कार्यक्रम सकिएपछि जिया जापानमै बसिन् भने भुवन र अनमोल अमेरिकामा अर्को अवार्डका लागि पुगेका थिए । त्यसपछि उनीहरु कामना फिल्म अवार्डका लागि नेपाल आइपुगे ।
Breaking : भर्खरै ! अन्तराष्टिय एयरपोर्टमा ल’फडा भयो यो के हुदै छ ? [भिडियो सहित]
टंकको गितमा टिकटक स्टार गिता ढुङ्गाना,चर्चा बटुल्दै ‘१६ वर्षे उमेरले’